Maro ny tranga fakana an-keriny nisesy tamin`ity taona ity ary tsy mba misy ny fitoriana kanefa vola tsy tambo isaina no takian`ireny tambajotra tsy mataho-tody ireny. Ho an`ny teratany vahiny manokana, tsy hay raha misy ambadika politika fa raha ny loharanom-baovao dia fandrahonana no atao azy ireo. Tsy fantatra mazava fa ny vola azo avy amin`ireny no nanaovana propagandy satria nisy olona akaiky tamina kandidà ho filoham-pirenena no voarohirohy tamin`ity resaka kidnapping ity. Tsy misy fanavakavahana fa na vahiny na tompon-tany dia samy mandry an-driran`antsy avokoa noho ny loza mitatao. Lasa misy fiantraikany any amin`ny olo-tsotra ity asa ratsy ity ary mizaka izany amin`izao ny tontolo any ambanivohitra. Tsy misy afa-tsy ny fanampiana ny isan`ny mpitandro ny filaminana no azo atao ary hamafisina ny sampandraharaham-pitsikilovana sy ny fiarovan-tenan`ny mponina any ambanivolo. Ho fanampin`izany, tokony hiverenana dinihana ihany koa ny momba ny dina. Lasa fanao sy niverimberina io asa ratsy io ka manaratsy endrika an`I Madagasikara hatrany. Inona no ataon’ny manampahefana e ? Mahakasika ny asa fakana an-keriny izay nihanahazo vahana tato ho ato, naverina ny “cellule d`enquete mixte” (CME) hisahana ny asa fakana an-keriny ka ho hita izay vokany.